Yini i-Low Voltage Wiring? - I-Connexions Technology (Dong Guan) Ltd.
KuyiniIntambo Ye-Voltage Ephansi?
Amfuthila aphansii-wiring kagesi kanye ne-trim ethwala ngamfuthila kagesi angaphansi kwama-volts angama-50. Iphatha amfuthila amancane kunalokho okutholakala ekhaya, ngokwesibonelo, izindawo ezidayisa amfuthila ezijwayelekile zodonga zingu-120V noma i-240V izikhungo eziphehla ugesi, izinto ezifakwa kuzo, nezishintshi.
I-cabling eyakhiwe yakhiwe kunethiwekhi ehlukile kunekhaya lakho’izintambo ezijwayelekile. Ngoba’kuhlukanisa usonkontileka onentambo onolwazi ogxile ezintanjeni zamfuthila kagesi aphansi kubalulekile ngenkathi kwakhiwa ikhaya elisha. Bazokwazi ukwakha kahle ingqalasizinda esekela izidingo ezijwayelekile zabaninimakhaya abaningi banamuhla futhi baqinisekise ukuthi ingakhuphuka ukubhekana nanoma yikuphi ukwengezwa okwengeziwe kukagesi esikhathini esizayo.
Izinhlobo ezijwayelekile zezintambo ezisetshenziswa ezintanjeni ezinamfuthila aphansi zifaka:
Izintambo ze-RJ11asetshenziselwa izingcingo ngokuvamile.CAT5E futhiCAT6 isetshenziselwe i-Amanethiwekhi wedathafuthito carry audio futhivideo signals. Fiber optic can transmit large amounts of data, video, audio at high speeds futhikuyintowidely used in internet networks. RG59, RG6 nomaIkhebula le-RG11 75 ohm coaxial kuyintocommonly isetshenziselwe i-I-CCTV,I-CATV, Isathelayithi TV, njll.
Ama-Concoxion we-CTC anolwazi olungaphezulu kweminyaka engu-17 ekwenzeni lonke uhlobo lwezintambo ezisezingeni eliphakeme ze:
â € ¢RG11 IsathelayithifuthiCAIzintambo ze-TV
â € ¢ UcingofuthiUkuxhuma idatha
â € ¢ Amasistimu Womsindo Ozungezile
â € ¢ Intercom
â € ¢ Izinhlelo Zokuphepha
â € ¢ Home Audio, Video futhiIzinhlelo Zeshashalazi
To find out more about Our Services futhischedule a consultation call or, xhumana nathi online.